WALWAL: Cristiano Ronaldo Si Cad Oo Cadho Wayni Ku Jirto Madax Waynaha Kooxdiisa Ee Florentino Perez Ugu War Galiyay In Uu Dhamaadka Xili Ciyaareedkan Baxayo. – WWW.Gool24.net
WALWAL: Cristiano Ronaldo Si Cad Oo Cadho Wayni Ku Jirto Madax Waynaha Kooxdiisa Ee Florentino Perez Ugu War Galiyay In Uu Dhamaadka Xili Ciyaareedkan Baxayo.
Xidiga xulka qaranka Portugal iyo kooxda Real Madrid ee Cristiano Ronaldo ayaa si cad oo cadho wayni ku jirto madax waynaha kooxdiisa Real Madrid ee Florentino Pérez ugu sheegay in uu dhamaadka xili ciyaareedkan isaga tagayo Santiago Bernabeu. Kadib guuldaradii Real Madrid ka soo gaadhay kooxda Tottenham Ronaldo ayaa si cad saxaafada uga horsheegay in aanu kordhinayn heshiiskiisa Los Blancos isaga oo markaas sheegay sababta keentay in ay kooxdiisu hoos ugu dhacday.
Laakiin wargayska Don Balon España‏ oo ka soo baxa dalka Spain ayaa cadeeyay in Ronaldo uu maamulka kooxdiisa u cadeeyay in xagaaga soo socda uu baxayo isaga oo waliba si cadho leh ugu sheegay Perez in aanu kooxdiisa ku sii nagaan doonin.
Wariyaha Edu Aguirre ayaa barnaamijka ‘El Chiringuito’ ku cadeeyay in Cristiano Ronaldo uu haddaba maamulka kooxdiisa u sheegay in uu baxayo wuxuuna Auguirre sheegay in Cristiano Ronaldo uu si waali ah uga cadhooday qandaraaska cusub ee ay Los Blancos u soo bandhigtay si uu Madrid ugu sii nagaado.
Cristiano Ronaldo ayaa la sheegay in uu kooxdiisa ka doonayay jacayl ka badan kan ay heshiiska cusub ugu soo bandhigeen maadaama oo uu aaminsan yahay in wax walba oo uu awoodayay uu maaliyada cadaanka ah ku soo qabtay, wuxuuna xidiga ree Portugal ka cadhooday in ayna kooxdiisu siin qiimihii uu filayay in uu ka mudan yahay iyga.
Wariyaha barnaamijka ‘El Chiringuito’ ee Edu Aguirre ayaa intaa raaciyay in Cristiano Ronaldo uu madax waynaha kooxdiisa Real Madrid ee Florentino Pérez uu ka dalbaday in uu fududeeyo bixitaankiisa waxaana warbixintan la sii raaciyay in Ronaldo uu tan iyo xagaagii hore doonayay in uu baxo balse in aanu helin dalabyo muhiim ah ayaa sabab u noqotay in uu Madrid ku sii nagaado.
Cristiano Ronaldo ayaa wali ka cadhaysan in xeer ilaalinta Spain ay dacwad waqti dheer socon doonta ku soo oogeen isaga oo July 31 markii ugu horaysay maxakmada ka soo muuqday wuxuuna markaas xaakinkii dacwadiisa dhegaysanayay uu u sheegay in uu England ku laabanayo maadaama oo aanu hore u soo arag dhibaato sharci intii uu Man United ka ciyaarayay.
Warbixinta wargayska Don Balon España ayaa la sii raaciyay in Cristiano Ronaldo uu sidoo kale ka cadhaysan yahay wararka Real Madrid la xidhiidhinayay Neymar Jr ee sheegaya in xidiga ree Brazil uu noqon doono badalkiisa Bernabeu iyada oo Ronaldo uu dhawaan noqon doono 33 sano jir ayay soo baxeen warar badan oo sheegayay in Neymar uu noqon doono ciyaartoy Madrid ah si uu Ronaldo u badalo.
Si kastaba ha ahaatee, in qaab ciyaareedka Ronaldo uu si wayn xili ciyaareedkan hoos ugu dhacay isla markaana aanu farxad badan ku haysan kooxda Zidane oo aan qaab ciyaareedkii laga filayay ku jirin ayuu Ronaldo maamulka kooxdiisa si cad oo waliba cadho leh ugu war galiyay in uu baxo xagaaga soo socda isla markaana ay isaga u fudaydiyaan bixitaankiisa maadaama oo heshiiskiisa hal bilyan oo euros lagu jabin karo isla markaana ayna jirin koox lacagtaas bixinaysaa.